बधाई चरीमायाको शक्तिलाई ! – Chitwan Post
मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुद्वारा सञ्चालित विश्वकै पहिलो संस्थाका रुपमा परिचित चरीमाया तामाङको नेतृत्वमा स्थापित सामाजिक संस्था शक्ति समूहले यस वर्षको प्रतिष्ठित “रामोन म्यागासेसे अवार्ड” प्राप्त गरेको छ । एसियाको नोबेल पुरस्कारका रुपमा मानिने म्यागासेसे संस्थागत रुपमा नेपालले पाएको यो पहिलो पटक हो । शक्ति समूह बेचबिखनमा परेका महिलाहरुद्वारा सञ्चालित संस्था हो । उक्त संस्थाले बेचबिखनमा परेका महिलाको उद्धार गर्नुका साथै मानव बेचबिखनविरूद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । हाल ११ वटा जिल्लामा बेचबिखनमा परेका महिलाहरुमाझ काम गर्दै आएको उक्त संस्थाले पाँच सयभन्दा बढी बेचिएका चेलीहरुको उद्धार गरी पुनस्र्थापना गरिसकेको छ । मानव बेचबिखनविरूद्धको अभियानमा सक्रियतापूर्वक काम गरेबापत संस्थाकी संस्थापक चरीमाया तामाङले २०११ को “हिरो एक्टिङ टु इन्ड मोर्डन डेज स्लेभरी” नामक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेकी छन् । मानव बेचबिखनजस्तो सामाजिक अपराधविरूद्ध १७ वर्षअघिदेखि संघर्ष गर्दै आएको उक्त संस्थाले प्रतिष्ठित म्यागासेसे अवार्ड पाउनु नेपालको गरिमा र नेपालीको गौरब बढाएकोे महसुस गरिएको छ ।
निस्वार्थ रुपमा सामाजिक योगदान गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिने प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट निस्वार्थ भावनाले गरिएको कामको मूल्यांकन पनि राम्रै हुँदोरहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । उक्त पुरस्कारले चरीमाया मात्र होइन, मानव बेचबिखनविरूद्ध प्रतिबद्धता जनाउने सबैलाई खुसी तुल्याएको छ । रामोन म्यागासेसे अवार्ड फाउन्डेसनले नेपालको शक्ति समूहसहित अन्य दुई संस्था र तीन व्यक्तिलाई पनि उक्त अवार्ड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अवार्ड आगामी अगस्त ३१ तारिखमा फिलिपिन्सको सांस्कृतिक केन्द्रमा वितरण हुनेछ । मानवीय सेवा, सूचनाप्रविधि, मानवअधिकार, साहित्य, सञ्चारलगायतका विषयमा योगदान गर्ने विश्वभरका व्यक्ति तथा संस्थाका लागि हरेक वर्ष उक्त अवार्ड प्रदान गरिन्छ । यसअघि नेपालका वरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइराला, साहित्यकार महेशचन्द्र रेग्मी, डा. सन्दुक रूइत र महावीर पुनले म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् ।
विविध समस्या भोगेका बेचबिखनबाट प्रभावित महिलाहरुको प्रयासमा १९९६ मा संस्था खुलेपछि सयौँ महिलाहरुको उद्धार भएको छ । भारतको मुम्बईलगायत विभिन्न देशमा बेचिएर बिचल्लीमा परेका महिलाहरुले आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । बेचिएर फर्किएका महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको थिएन । बेचबिखनमा परेकाहरु समाजमा पुनस्र्थापन हुन सकेका थिएनन् । चरीमाया आफैँ लामो समय मुम्बईको कालकोठरीमा शारीरिक र मानसिक समस्या भोगेर फर्किएकी हुन् । उनीजस्तैै नियति भोगेका महिलाहरुको संयुक्त पहलमा संस्थाले काम गर्दै आएको थियो । उदाहरणीय कार्य गर्ने शक्ति समूहको अभियानबाट अरु थुप्रै महिलाहरुलाई पनि काम गरेर देखाउने शक्ति र उत्प्रेरणा मिल्नु जरूरी छ ।